Torrent | January 2020
Ọtụtụ ndị na-eji Ịntanetị na-eji teknụzụ BitTorrent ibudata faịlụ bara uru dị iche iche. Ma, n'otu oge ahụ, obere akụkụ nke ha ghọtara ma ọ bụ na-aghọta usoro nke ọrụ na onye na-ahụ maka mmiri maara ihe niile. Iji mee ihe n'ụzọ dị irè, ọ dịkarịa ntakịrị ka ị ghọta ihe ndị bụ isi.
Ngwọta na nsogbu nbudata "iyi na-ezighị ezi"
Ọtụtụ ndị na-egwu mmiri na-eche banyere ajụjụ dịgasị iche iche banyere njehie dị iche iche na-ebili mgbe ha na onye na-egwu mmiri na-arụkọ ọrụ. Ọtụtụ mgbe, ha doro anya na edozi ha ngwa ngwa, ma ụfọdụ chọrọ mgbalị, oge na akwara. Ọ na-esiri m ike ịnyagharị ọhụrụ nke nwere ike ma na-agbalị ịchọta nkọwa ndị ọzọ banyere nsogbu ahụ bilitere, ma enweghị ike ịchọta ihe ọbụla ma ọlị.
Ngwọta na njehie nke ndị ahịa mmiri "Dee na diski. A na-anabata nnweta"
N'okwu ụfọdụ na-adịghị adị, onye ọrụ nke onye na-ahụ maka mmiri nwere ike ịnata njehie "Dee na disk. Nsogbu a na-eme mgbe usoro ihe omume ahụ gbalịrị ibudata faịlụ na diski ike, ma na-eche ihe mgbochi ihu. Mgbe mgbe, site na njehie dị otú ahụ, nbudata na-akwụsị n'ihe dị ka 1% - 2%.
Izizi njehie "Enweghị ike ịchekwa iyi"
Ndị ọrụ ahụ na-ejikarị ememme mmemme, ọbụna mgbe ha chere ọtụtụ njehie. Na-emekarị, n'ihi na onye nwere ahụmahụ iji dozie nsogbu ahụ dị mfe karịa maka onye mbido, nke bụ ezi uche. Nke a siri ike. Otú ọ dị, ọ bụghị mmadụ nile nwere ike ikpebi isi iyi nsogbu ahụ ma mara kpọmkwem otu esi edozi njehie nke onye ahịa ahụ.
Ihe ngwọta nke njehie ndị ahịa ahụ: "Eweliteghị ụda nke mbụ"
Torrent aghọwo ezigbo ewu ewu n'ihi na ọ bara uru. Ma, ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ ga-abịa. Dịka ọmụmaatụ, njehie "Ụda nke mbụ agaghị agbanye," nwere ike itinye onye ọrụ na-enweghị ahụmahụ na njedebe nwụrụ anwụ, n'ihi na tupu nke a ihe niile dị mma. Nsogbu a anaghị ebili ma ọ bụrụ na ọ bụ ncha.
Otu esi agafe ihe mkpọchi igwe
Nkà na ụzụ BitTorrent abanyewo ndụ ọtụtụ mmadụ. Taa, e nwere ọtụtụ ndị na-egwu egwu na-enye ọtụtụ puku ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ nde faịlụ dị iche iche maka nbudata. Ihe nkiri, egwu, akwụkwọ, egwuregwu dị na ngalaba ọha maka onye ọ bụla chọrọ ya. Mana ebe enwere etiti, enwere ala.
Ndị na-agba ume-ahịa bụ ihe omume dị mma na nke a hụrụ n'anya. Mana n'otu oge, ụfọdụ n'ime ha kwụsịrị ịkwụsị ma tinye "njikọ na ememme" na-enweghị ọgwụgwụ. Ma nke mere na ị naghị eme ya, mana enweghị nbudata ọ bụla echere. Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ya, ma na-enye obi ụtọ, enwerekwa ọtụtụ nhọrọ iji dozie nsogbu iwe a. Ya mere, ewela iwe na egwu n'ihu oge, ma eleghị anya, ihe niile edozila.
Ndozi nsogbu na ịmepe onye ahịa mmiri
Site n'ichewanye nke ndị ahịa ahịa, onye ọrụ ọ bụla nwere ike iche ụdị nsogbu niile. Otu n'ime ihe ndị a bụ enweghị ike imeghe usoro ihe omume ahụ. E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya, n'ihi ya, ị ga-ebu ụzọ chọpụta ebe ọ si bịa. Ya mere, ị ga-eme ka ọrụ gị dị mfe ma zọpụta ọtụtụ oge.
Esi ewepu mgbasa ozi na ndị ahịa mmiri
Ndị ahịa ugbu a bụ Torrent-ndị ahịa dị oke ọnụ, interface enyi-enyi, ọrụ dị elu na enweghị nrụgide dị ukwuu na kọmputa ahụ. Mana ụfọdụ n'ime ha nwere nkwụsị - mgbasa ozi. Ọ naghị egbochi onye ọrụ, ọbụnakwa na-ewute ndị ọzọ. Ndị mmepe na-aga nke a n'ihi na ha chọrọ ịkwụ ụgwọ maka ọrụ ha. N'ezie, enwere nsụgharị nke usoro ihe omume ndị ahụ na-enweghị mgbasa ozi.
Kedu esi eji ndị ahịa mmiri na kọmputa
Ndị ahịa Torrent bụ mmemme ndị na-enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta faịlụ ọ bụla. Iji nwee ike ịchọta ihe nkiri ahụ chọrọ, egwuregwu ma ọ bụ egwu, ịkwesịrị ịwụnye onye ahịa na kọmputa ahụ ma nwee faịlụ faịlụ achọrọ nke sitere na tracker pụrụ iche. O yiri ka ọ bụ ihe mgbagwojuanya, ma maka onye mbido, ọ ga-esiri ike ịchọta, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ dịbeghị eji nkà na ụzụ BitTorrent.